Vaovao - Fomba fitsaboana an-toerana ho an'ny fiviliana fehikibo
Fomba fitsaboana eo an-toerana ho an'ny fiviliana fehikibo
1. Araka ny haben'ny habetsahan'ny fitaterana dia mizara ho: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Modely mahazatra toy ny B1400 (B dia midika ho sakany, milimetatra). Amin'izao fotoana izao, ny fahaiza-manao famokarana lehibe indrindra an'ny orinasa dia ny fehikibo conveyor B2200mm.
2. Araka ny tontolon'ny fampiasana isan-karazany dia mizara ho fehikibo vita amin'ny fingotra mahazatra izy io, fehin-kibo mpanohitra hafanana, fehin-kibo mpanohitra vita hatsiaka, fehikibo mpanelanelana vita amin'ny gazy mahazaka alkali, fehikibo mahazaka conveyor mahazaka, fehikibo mpanatitra sakafo ary modely hafa. Ny hatevin'ny fehikibo farany vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo mahazatra sy ny fehikibo mpampita sakafo dia 3.0mm, ary ny hatevin'ny fehikibo farany ambany dia ny 1.5mm; fehin-kibo mpanohitra mahazaka hafanana, fehin-kibo mpanohitra mahazaka hatsiaka, fehikibo mpanohitra vita amin'ny asidra sy mahazaka alkali, ary fehikibo mahazaka tsy mahazaka solika. Ny hateviny ambany indrindra amin'ny lakaoly dia 4.5mm, ary ny hateviny ambany amin'ny fonony ambany dia 2.0mm. Araka ny fepetra manokana momba ny tontolon'ny fampiasana, ny hatevin'ny 1.5mm dia azo ampiasaina hampitomboana ny androm-piainan'ny fingotra ambony sy ambany.
3. Araka ny tanjaky ny fehin-kibo mpampita, dia azo zaraina ho fehikibo mahazatra ho an'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny canvas sy fehin-kibo mahery vaika. Ny fehin-kibo mpampita lamba mahery dia mizara ho fehin-kibo nylon (fantsom-pifandraisana NN) sy fehikibo mpampita polyester (fehikibo mpampita EP).
2. Fomba fitsaboana eny an-toerana amin'ny fiviliana amin'ny fehikibo
(1) Fanitsiana ny fanodikodinam-bokatra automatique automatique: Rehefa tsy lehibe ny elanelan-tsolika amin'ny fehikibo conveyor, dia azo apetraka amin'ny solo-tsolika ny fehikibo.
(2) fanitsiana mety sy fanitsiana mety: Rehefa mivoaka avy amin'ny ankavia miankavanana ny fehikibo, ary tsy ara-dalàna ny lalana, midika izany fa malalaka loatra ny fehikibo. Ny fitaovana mihenjana dia azo ahitsy amin'ny fomba mety mba hanafoanana ny fiviliana.
(3) Fanitsiana ny fanodinam-bidy mihombo amin'ny lafiny iray: ny fehikibo conveyor dia mivily lalana hatrany, ary maro ny rojika mitsivalana azo apetraka ao amin'ilay faritra mba hamerenana ny fehikibo.
(4) Amboary ny fanodikodinam-bolo: mihodina ny roller ny fehikibo conveyor, jereo raha tsy ara-dalàna na mihetsika ny roller, manamboatra ny roller amin'ny toerana marindrano ary mihodina mahazatra mba hanafoanana ny fiviliana.
(5) Manitsy ny fiviliana amin'ny fehikibo fehikibo; ny fehikibo conveyor dia mihazakazaka hatrany amin'ny lalana iray, ary ny fiviliana faran'izay betsaka dia eo amin'ny fiaraha-miasa. Ny fehezam-pifamoivoizana sy ny tsipika afovoan'ny fehikibo dia azo ahitsy mba hanafoanana ny fiviliana.
(6) Manitsy ny fiviliana amin'ny roller dragona natsangana: ny fehikibo conveyor dia manana làlan-kaleha sy halaviran-dàlana, ary vondron'olona maromaro dia azo atsangana amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny làlan'ny fiviliana mba hanafoanana ny fiviliana.
(7) Amboary ny fanodikodinan'ny roller drag: ny làlan'ny fiviliana fehikibo dia azo antoka, ary ny fizahana dia hita fa ny tsipika afovoan'ny roller roller dia tsy mifanaraka amin'ny tsipika afovoan'ny fehikibo mpampita, ary ny roller ahitsy mba hialana amin'ny fiviliana.
(8) Fanesorana ireo miraiki-po: ny teboka fiviliana amin'ny fehikibo mpampita dia mijanona tsy miova. Raha misy kofehy mifatotra hita ao anaty horonan-tsarimihetsika sy amponga, dia tokony hesorina ny fiviliana aorian'ny fanesorana azy.
(9) Manitsy ny fiviliana amin'ny sakafo: ny kasety dia tsy mivaona ambanin'ny enta-mavesatra ary tsy mivaona eo ambanin'ny enta-mavesatra. Ny lanjan'ny sakafo sy ny toerana dia azo ahitsy mba hanafoanana ny fiviliana.
(10) Manitsy ny fiviliana amin'ny bracket: ny làlan'ny fiviliana amin'ny conveyor belt, raikitra ny toerana ary matotra ny fiviliana. Ny haavon'ny haavon'ny bracket dia azo ahitsy mba hialana amin'ny fiviliana.